ITeam of Choice ibuyise izinduku kwiSuperSport - Impempe
ITeam of Choice ibuyise izinduku kwiSuperSport
February 15, 2022 Impempe.com
IMaritzburg United izibuyise zishisa izinduku kwiSuperSport United eyishaye ngo 2-1 emdlalweni weDStv Premiership, eHarry Gwala Stadium, eMgungundlovu, ngoLwesibili ebusuku.
ISuperSport iyona ewashise ijezi iMaritzburg kwiNedbank Cup iyishaya ngo 1-0 kuyona le nkundla ngeledlule. Nokho emdlalweni wangoLwesibili kucacile ukuthi ezika-Ernst Middendorp bezingafuni ukushayelwa ekhaya.
YiTeam of Choice ebihlasela iphindelela ngesiwombe sokuqala. Lokhu kucaciswe ukuthi ithole amakhona ayisithupha kanti imbuze kathathu ukuthi ukhona yini ezinti ukaputeni wamMatsatsantsa a Pitori, uRonwen Williams.
Ngasohlangothini lweSuperSport ibihluleka ukufika emapalini eMaritzburg saze saphela goloqo isiwombe sokuqala. Akukho khona etholwe izivakashi ngesiwombe sokuqala okuchaza kona ukuthi bekugiya iTeam of Choice.
Nokho iqembu lasekhaya alilitholanga igoli ngokushesha njengoba lilinde kwaze kwaba imizuzu yokugcina esiwombeni sokuqala. Bese kubukeka sengathi kuzoyiwa ekhefini kungu 0-0 kodwa uFriday Samu walibeka phakathi ngomzuzu ka-45.
Lo mdlali ubeqala ukudlala umdlalo weligi kwiMaritzburg njengoba esayiniswe esuka kwiGreen Buffalo yaseZambia ngoJanuwari. Kuleli qembu laseZambia uhlohle amagoli angu-14 emidlalweni engu-18.
Isiwombe sesibili siqale ngendlela ehluke kakhulu kuyiSuperSport ebisihlasela iphindelela. Lokhu kuholele ekutheni ithole ifree kick ethathwe uKudakwashe Mahachi wayingqofela phakathi uJesse Donn ngomzuzu ka-55.
Ngemuva kwalokho bese kuphungwa iSuperSport futhi kuyiyona ebisithola amakhona elandelana. Nokho ngomzuzu ka-71 uSamu uphasele uRowan Human ibhola elihle ebhokisini, wangacucuza walibeka phakathi kwaba ngu 2-1.
Uphinde washintsha futhi umdlalo kwaba yiTeam of Choice ebihlasela, kubhoke yena umfo waseZambia uSamu. ITeam of Choice ibiqala ukuwina umdlalo weligi ngemuva kwemidlalo eyishumi.
Previous Previous post: ICity neChiefs bahubhe utalagu baze bakhathala bengalufici
Next Next post: Ngabe iChiefs seyimhlulile uBaxter?